Tan iyo hordhaca ah ee Gameboy 1989, Gameboy iibiyey in ka badan 160 milyan oo ka mid ah nidaamyada ay dunida. Shaashadda waxay ahayd afar midabada cirro laakiin karo qalab lagu qeexay ciyaaraha la madadaalo aad u daran. The Gameboy oo la soo bandhigay ee 1989 ayaa waxaa si dhow u la xidhiidha ciyaarta classic Tetris, Gameboy waa ugu guulaha badan ciyaarta video weligood sii daayay. Gameboy waxaa wada sameeyey Gunpei Yokoi iyo kooxdiisa. Gameboy ayaa sii daayay ka badan 650 kulan oo ilaa hadda.
Processor: 16 MHz 32-yara RISC-processor + 8-bit CISC-processor
Screen: milicsiga midableh LCD
Qaraarka: 240 x 160 pixels
Display midabo: 32 000 oo midabo
Xoogna ku hadla Mono, headphones rikoodh
Multiplayer Options: Ilaa afar GBAs, ilaa laba GB / GBCs
Power: Laba baytariyada AA,
Nolosha Battery: 15 saacadood baytariyada
Sababta Gameboy nahay:
Maanta waxaan heysanaa qalab badan ciyaaraha qaadi karo sare ka sii dhakhso badan oo ka fiican tahay Gameboy, ciyaaraha ku qaadan karo ma aha jidkii, waxay ahayd 1980, laakiin xitaa maanta dadka qaar weli jeclaan lahaa inuu ka ciyaaro Gameboy horumariyo kulan ee nidaamka, si horumarinta la shaqeeyay tan iyo sano oo isku dayaya in ay ku daydaan nidaamyada Gameboy wareejisaa kombuyuutarrada gacanta sare oo cusub.
Taageerayaan Operating Systems beegti iyo xaasidnimo Wixii GBA:
Emulators Game wiil ah loo horumariyo socda nidaamyada hawlgalka:
Top 10 GBA Emulators In Market:
1.Visual Boy Advance:
Tani waa emulator Gameboy ugu fiican waa cajiib karaankeeda ah dhamaan kulamada ay xawaare ku haboon. Waxa uu awood u leeyahay in ay la tacaalaan khiyaameeya iyo ordi ciyaarta, diirada waa weyn.
Visual horay wiil waa sidaas oo kale ah oo horay dhabta ah Gameboy iyo waxa ay sidoo kale ka ciyaari kara kulan asalka Gameboy. Sidaas aad run ahaantii uma baahna heli emulator gaar ah. Taageerayaan Platform: WINDOWS
Hab screen Full
Tus layers RGB
ZIP ROMS taageeray
Graphics waa weyn
Easy in ay ku shaqeeyaan
Play ee shaashadda ballaaran
Qaadacaan ka hor waxaa lagu horumariyaa in uu ordo Gameboy horay Games oo ka shaqeeya la yaab leh si fiican. Mid ka mid ah cabashada weyn u taageeray codka lahayn oo dhan, iyo sidoo kale in uu ahaa go'an in version 0.21b ay.
Qaadacaan Advance waa Cardware in ka dhigan tahay in aad soo diro kaarka post a in qorayaasha oo muujinaya halka aad ku nooshahay. Waxay leedahay dekedaha nidaamyada kale sida MAC, BeOS, iyo Linux. Waxaa la socon kara qaar ka mid ah kulan ganacsi, inkasta oo aanay jirin qorshe ay ku baxeeyso kasta oo dadaal dheeraad ah oo ku waafaqsan ilaa Gameboy Advance mar dambe on sale ganacsi waa.
Ayna si hufan oo keena in qaab degdeg ah oo ku saabsan nidaamka MAC
Taageerada Features sida qaadidda iyo rogista cajaladda.
Taageero Qayb ah ee channels GBA Direct Sound iyo Gameboy PSG.
Taageero kulan Ganacsiga
Aad si fiican loogu talagalay
Taageerada dhufto ee OS badan
Qaab Fast emulator
Nosgba waa emulator ah u Windows iyo DOS. Waxaa taageeri karaan ROMS Gameboy horay ganacsiga iyo homebrew, shirkadda ku andacoonaya sida shil GBA qaababka ugu iftiimiyay ka mid ah badan rasaasta akhriska, taageero multiplayer, ugu rarataan culaysyo badan NDS ROMS No.
4.MY ugu kicitimay Emulator
Wiilkayga waa emulator ah u socda kulan GBA qalabka Android aad u taageeraa oo dhan oo ka mid ah qoraalkii android waxa ay leedahay kasta ciyaari aad u baahan tahay inuu ciyaaro kulan GBA qalabka android aad.
Iyaga oo ku taageera badbaadin nidaamka dawliga ah
Iyaga oo ku taageera dialogs gudub
Taageerada weeraryahanka degdeg ah
Waafaqsan ciyaarta Wanaagsan
Interface si fiican loo qorsheeyay
Shilalka mararka qaarkood
Guuldarraysato inay ku shuban ROMS mararka qaarkood
RascalBoy Advance ayaa kudayasho inta badan fursadaha saldhiga u ah Gameboy ka hor, emulator ka taageertaa baakad luqadda, iyo waxa ay leedahay taageero multiplayer u PC la mid ah. RascalBoy dhab ahaan waxa uu noqday mid ka mid ah emulators fiican.
Taageerada baakad Language
Taageerada 4 ciyaaryahan oo kala duwan.
Taageero Language Multiple
Waxaad u baahan tahay PC wuxuu Soomi emulator this
BatGba waa emulator kale Gameboy, emulator ceelkan ay maamushaa oo ay maamushaa inta badan ciyaarta emulator waa ool ah, waxaa aad u sahlan in la fahmo iyo in la isticmaalo. BatGba waddaa inta badan Advance Gameboy ku Games.
Emulator filaayo in waddaa degdeg ah
Gamepad Configurable iyo taageero keyboard
Taageerada fursadaha keydinta ciyaarta.
Easy si loo soo dajiyo iyo fahmaan
Shilalka waa mid caadi ah
Mararka qaar si ku shuban ROM guuldareystaan, s
No taageero qiyaanoole
Qoraaga of DreamGBC ayaa sameeyay baha DreamGBA .Waxa inta badan kulan la taageero dhawaaqa. DreamGBA waa emulator line amarka ah kaas oo la bilaabay codsiga loader ah. Waxaad u baahan tahay ah BIOS Gameboy horay asal ah in ay sii wadaan.
Ma aha sharci in la qaybiyo BIOS dhabta ah iyo waxa aad u adag tahay in la soo helo.
Iyada oo taageero dhawaaqa.
Waddaa dhowr kulan.
Waddaa kulan badan
U baahan ROM Gameboy Advance dhabta ah.
Ordi karaa oo keliya iyadoo loader codsiga.
Emulator wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u ciyaaro kulan Gameboy Advance aad ku qaadan karo Playstation. Khayaadka oo Gameboy ka hor waa mid aad u badan oo laga cabsado aad PSP emulator ay u baahan tahay GBA BIOS ay sidaa u shaqeyn aad u baahan tahay si aad u hesho BIOS ah.
joogo taageero codka
khiyaameeyaan joogo taageero
Xallinta Screen Full on PSP
Taageerada qaababka saldhiga u ah Gameboy ka hor.
Taageerada khiyaameeyaan uma muuqato in ay ka shaqeeyaan dadka isticmaala badan.
Qodobbadani dhibaato ku headphones ku xirnayn.
Waxaa loo baahan GBA BIOS ah in ay sii wadaan.
Waxaa jira version kale oo Visual Boy Advance u PSP waxaa jira dhowr qeybood oo la hagaajin.
Emulator Tani waa si dhakhso ah sida barbar emulators kale PSP
Jabaqda iyo khiyaameeyaan taageero
Graphics soo hagaagaya
Tayada codka hagaajin
Shilalka badan oo aan weli degganeyn
Arrimaha Sound inta badan isticmaala
> Resource > Emulator > Top 10 GBA emulators - ciyaaro kulan Game Boy Advance on aaladaha kale ee